Trendy Dating Apps kwi-China
Tanta, Isitshayina app kuthelekiswa Tinder, sele nje wavusa phezu KWETHU dollazi M kwi-uphawu-mali. Tanta isebenza ngendlela efanayo ukuba Tinder ingaba, kwaye nkqu ikhangeleka ngathi oko. Abasebenzisi unako zalisa ngezandla zabo inkangeleko inkcazelo kwaye umdla. Enyanisweni, kulo mhlaba, akukho Isitshayina app sele kodwa elawulwayo ukuya kuqokelela abasebenzisi umdla njengoko Facebook ingaba. Ngoko ke, abantu bayakwazi swipe ekhohlo okanye ekunene ukuba babe ngathi okanye musa t na inkangeleko bebona kwi zabo ikhusi. Kanye swiping kwenzelwa, ezinye inkangeleko kufuneka ngokukhawuleza ivele. Unako ke qalisa incoko ukuba bobabini inkangeleko yakho kwaye omnye kuni liked thelekisa. Pros”baninzi young kwaye engaselunxwemeni abantu usebenzisa Tanta, apho ubani pretty enkulu umsebenzisi-base. Ngaphezu koko, abantu ziyalawuleka ngayo iselwa ngokulula”wachaza oku ingcali of China. Cons Kukho kuphela ezimbalwa real iincoko neentlanganiso kuthelekiswa inani imifanekiso. Kwakhona, kulo mhlaba, esingekhoyo ingakumbi ngenxa app, kunye apps ukungena iziphumo zabo kwi-nokungabikho inyaniso. Ngaphezu koko, kufuneka uhlobo kwi-eyakho umdla, oko kusenokuba annoying. Nazo zonke ezi olukhawulezayo uhlaziyo kwi Isitshayina Tinder, ungakhetha ngoku qala swiping. Siyathemba kakhulu ukuba uza kukwazi ukufumana Enye. Ngendlela efanayo kunokuba Tanta (kwaye Tinder), Jintao yenza ukuba ahlangane phezulu kunye abantu. Nangona, ayo engundoqo umahluko kukuba oko sele i-yoqobo ujongano lomsebenzisi uyilo endaweni literally ukukopa Tinder s omnye. Abasebenzisi? kufuneka ufake ngezandla zabo umdla, kodwa i-app (kude kube ngoku) andinaku kunikela isixa-mali iinketho ezikhoyo ukuba Tanta sele. Cons -Abangaphantsi abasebenzisi kunokuba Tanta. Umgama esekelwe amacebo okucoca ayifumaneki. Bambalwa inzala iinketho ezikhoyo. Xa kwakhona, kukho akukho amacebo okucoca ezifumanekayo khetha ubudala. Kubonakala cacisa ukuba Tanta kwaye Jintao kwimali a fierce ukhuphiswano. Ngoko ke, ukuza kuthi ga ngoku, Tanta ithathe i-baphile, ikakhulu ngenxa yayo igama lomsebenzisi, ngokucacileyo eyona njongo kuba i-app ngokunjalo abasebenzisi bamanzi. Qingcheng kuthetha”mema umntu ukuba share a meal”. Rumors kuthi imihla ngokwenene kunokwenzeka, kokukhona rhoqo kunye qingtuan kune kunye nezinye dating apps. Nto iselwa kulula ukuqonda? Le app kumenywa ukuba share a sangokuhlwa yakhe isihloko, ngoko uza kamsinya kufuneka siye kulo. Le app mkhwa cacisa ebelilindelwe. Share a meal kunye umntu. Ke ngoko, lenza flirting kakhulu lula. Uyakwazi mema rapidly umntu ukuba badle. Kwi-i-ngokungothusiyo indlela, ke rhoqo abafazi abo get invited nge abantu. Ngoko ke idla, guys kufuneka kunikela sangokuhlwa kwi-app. Ngoko ke baya kuba ukhethe girls abo ujoyinela umhla. Nakanjani, ladies ingakunika sangokuhlwa kakhulu, ekusenokwenzeka ukuba isandi unusual, kodwa kwenzeka ukuba abe iselwa mnandi. Ke enkulu, indlela ukwakha entsha budlelwane nabanye, hayi nje enokwenzeka imihla, ngenxa indawo ekhethiweyo ukuba kuba bite ukuxelela kakhulu malunga wena yakho umhla. Pros ngcono ithuba lokufumana efanelekileyo umhla, yoqobo, free lunch kwaye inkulu igama lomsebenzisi Cons kwi-app purchases, kukawonke-wonke kufuneka ufumane nsnp. Abanye abantu babe nokufumana ukuba ngaba ngokwenene kufuneka ahlangane umntu enyanisweni. Momo ingaba kakhulu kuqala dating app ukuba sijongana wonke Eliphakathi Ubukumkani. Oko wabonwa njengoko eyona usetyenziso booty-ubizo ngexesha elithile. Ukuze ufumane uid le engalunganga reputation, Momo itshintshe ngokwayo ukusuka dating-focused app ukuba yenzala esekelwe loluntu malunga omnye. Oku inguquko kwaba kokukhona culturally owamkelekileyo. Ekubeni lokuqala kwaye wemiceli-dating app, abantu kwakhona cinga lento ethile app xa oko iza discovering abantu abatsha. Nangona kunjalo, i-app ayingomsebenzi omnye get ihamba kunye, ngenxa yayo ezininzi yongeza-ngomhla imisebenzi. Ikhangela abantu ebekwe kufutshane kuwe ngu pretty kulungile, kodwa unako kanjalo ukudlala umyalelo imidlalo kwaye ukungena umsebenzisi-generated amaqela. Momo sele i umdla inani langaphandle abasebenzisi, oko kuthetha unga sebenzisa olu setyenziso ngeendlela ezininzi ezahluka-hlukileyo amazwe mbombo zone zeli hlabathi.
Masihambe Momo. Pros iimpawu Ezininzi. App ngokusekelwe inzala kunye umgama. Enkulu umsebenzisi-base. Cons hayi ke, kulula ukuphatha. Epheleleyo ka-ads. Heartbeat – Ekhuselekileyo usetyenziso young abafundi Jindong ufumana i-app made kuba college abafundi. Bonke abasebenzisi kufuneka ufake institutional credentials ukuze ukwazi ukusebenzisa i-app. Oku engqongqo kakhulu icoca inkqubo ibonisa Jindong s determination ukuquka i kakhulu best of young kwaye educated abantu. Layo ukusebenza kakuhle lufana Ikofu Meets Bagel: ufumana isibini iyahambelana ngosuku, kwaye ukuba ulinganisa efumana olwamkelekileyo, kunye kuni kwaye yakho thelekisa unako ukuqalisa phezulu flirt. Jindong ayinguwo-mveliso dating app. Njengoko abo kukunika ii-intshi ezimbini ngosuku, ugcina a nihamba inyathelo nje oko kusenokuba elungileyo okanye engalunganga incopho, kuxhomekeke abasebenzisi’ opinions. Pros young, educated kwaye angqinwe ubunyani abasebenzisi, ezikhuselekileyo, ukhangela okulungileyo ujongano. Cons mhlawumbi kakhulu young bonke imifanekiso ngosuku, mhlawumbi hayi ezinzima ngokwaneleyo. Engqongqo yokwenza isicelo. Nceda qaphela amagama ingaba roughly iguqulelwe kwi-i-owamkelekileyo isixhosa intsingiselo. Baya musa ukuma njengoko igosa amagama.
Nceda musa t kuba offended ndicebisa ukuba ufuna ukufunda ukwahlula infinitives. I-zange yahlula infinitives ayikho ngqo a efanelekileyo isijamani umthetho ngesingesi (ngu ezisekelwe ngaphandle o Latinophile Victorian uluhlu lwezinto ezikhethwayo). Ibinzana, igalelo ngezandla zabo izinto ezikhethekayo ze – (kwaye ezimbalwa abanye), isandi absolutely oboyikisayo. Ukuba ngesandla igalelo ngu ngokugqibeleleyo okulungileyo kwaye yendalo isingesi
← Isitshayina girls-Skype kuba free incoko, ividiyo intetho okanye ukuphila cam